Qodobadii kasoo baxay Shirka bandhiga wax-soo-saarka Soomaaliya ee Dubai – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qodobadii kasoo baxay Shirka bandhiga wax-soo-saarka Soomaaliya ee Dubai
A warsame 19 March 2014 4 April 2019
Dubai – Mareeg.com: Waxaa dalka Imaaraadka Carabta lagu soo gebagebeeyey bandhigii wax-soo-saarka iyo maalgashiga dalka Soomaaliya, kaasoo mjuddo 2 cesho ah ka socday xarunta ganacsiga caalamiga ee Dubai.
Shirkan oo ay kasoo qayb-galeen ganacsato Soomaaliyeed iyo maal-gashadayaal caalami ah ayaa waxaa casharo ka bixinayay qubaro caalami iyo Soomaali isugu jiray, iyagoo si weyn xooggan u saaray qaabka la xiriira sida loo horumarin karo wax soo saarka dalka iyo jidadka loo mari karo.
Madaxa hay’adda FAO, Luga ayaa sheegay inay xoogga saari doonaan sidii ganacsatada Soomaaliyeed wax soo saarkooda loo horumarin lahaa, miraha ay beeraana looga iibsan tahay, intii dibadda laga keeni lahaa. Mr Luca ayaa sheegay in miraha Soomaaliya ka soo go’a lagu sameyn doono tayeyn, si loo dhiirri-geliyo wax soo saarka iyo maal-gashiga dalka.
“Soomaaliya waxay isugu taageeysa cagaheeda, beesha caalamkana arrintaas xil weyn ayay iska saarayaan sidii ay gacan uga geysan lahaayeen,” ayuu yiri madaxa FOA Mr. Luca.
Shirkan ayaa waxaa lagu soo bandhigay dhammaan wax soo saarka dalka, iyadoo maal-gashadayaasha caalamka ka socday, qubaradii iyo marti sharaftii kale uu si aad ah u soo jiitay kheyraadka badda iyo berriga Soomaaliya laga soo saaro.
Muddadii uu socday bandhiggan waxaa kasoo qayb galay mas’uuliyiinta ugu sarreysa hay’adaha wax soo saarka dalka qaarkood, ganacsato, shirkado caalami ah, qubaro iyo mas’uuliyiin ka tirsan dowladda sida, wasiirada xannaanada xoolaha Saalim Caliyow Ibrow, wasiirka kalluumeysiga, Colow iyo wasiirka ganacsiga, Aadan Saran-soor.
Dhanka kale, Rugta Ganacsiga Somalia ayaa faahfaahin ka bixisay shirkii ganacsiga iyo maal-gashiga iyo qodobadii gebagebadii kazoo baxay.
Agaasimaha Rugta Ganacsiga Somalia, Cabdi Abshir Dhoorre waxayna ahaayeen sidan:
1. In hore loo dhaqaajiyo wada-shaqeeynta ganacsiga Soomaalida, UAE, dowladaha caalamka, si loo qaado tallaabooyin horumariya saddexda waaxood ee wax-soo-saarka Soomaaliya u badan yahay iyo suuro-gelinta suuqgeynta wax soo saarkaas sida: Beeraha, Xoolaha iyo Kaluumaysiga.
2. In lagu caawiyo dowladda Soomaaliya hir-gelinta shuruucda aan looga maarmin wax soo saarka saddexdaas waaxood si ay u suuro-gasho inay ka qayb-galaan tar-tanka suuqyada adduunka.
3. Aqoonsashada iyo taageeridda kaalinta ganacsigu kaga jiro soo kabashada dhaqaalaha Soomaalliya, gaara ahaan saddexdaas waaxood ee kor kusoo sheegnay iyo weliba macaadinta iyo ganacsiga guud.
4. Gacan ka geysashada iyo dayac-tirka kaabayaasha dhaqaalaha meelaha aadka muhiimka u ah, si loo caawiyo waaxyaha beeraha, xoolaha iyo kalluumaysiga, sida dekedaha, kawaannada hilibka casriga ah, faya-dhoowrka iyo sahlidda dhoofinta wax-soo-saarka dalka.
5. In la yareeyo waxyaabaha caqabada ku ah ganacsiga iyo koboca dhaqaalaha dalka.
Intii shirkaasi socday waxaa lasoo bandhigay kheyraadka Soomaaliya leedahay ee isugu jira kan barriga iyo kan badda.
Kenya: Soomaali farabadan oo maxkamada kasoo muuqday